बलिउड फिल्मका यी दृश्य, जसलाई हेर्दा कठोर मान्छे पनि रुन्छ ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
बलिउड फिल्मका यी दृश्य, जसलाई हेर्दा कठोर मान्छे पनि रुन्छ !
बलिउडमा हालसम्म यस्ता तमामा फिल्म बनेका छन्, जसले दर्शकलाई रुवाएका छन् । यदी तपाई तुरुन्तै रुनु हुन्न भने पनि यी फिल्म हेर्दा तपाईंको आँशु रोकिन्न । यहाँ यस्तै पाँच फिल्मका दृश्यको वर्णन गरिएको छ, जुन दृश्यले दर्शकलाई रुवाएको थियो ।
फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ को क्लाइमेक्स दृश्य रुवाउने दृश्य मानिन्छ । यो फिल्मलाई लिएर मानिसको अलग अलग किसिमको राय छ । यो फिल्म नहेर्ने कमै मात्र दर्शक होलान् । यो फिल्मको अहिले पनि चर्चा हुन्छ र समय–समयमा यसलाई युट्युबमार्फत हेर्ने गर्छन् । यो फिल्मको क्लाइमेक्स दृश्य अन्य फिल्मको भन्दा केही फरक छ, जसकारण दर्शकले आफूलाई थाम्न सक्दैनन् ।
कुछकुछ होता हे
फिल्म ‘तारे जमीं पर’ मा इशानको रोएको दृश्य मार्मिक लाग्छ । कैयौं मानिसका लागि घर छोडेर अर्को बिरानो सहरमा जागिर खोज्नु गाह्रै कुरा हो । यसै गरी फिल्ममा इशानका परिवारले उनलाई बोर्डिङ स्कुलमा छाडिदिन्छन् । त्यही बेला इशान आफ्नो आमाका लागि यति रुन्छन् कि त्यो दृश्यले नरुने मान्छेलाई पनि रुवाइदिन्छ ।
फिल्म ‘वीर जारा’ का पुनर्मिलन दृश्यले उत्तिकै भावुक बनाउछ । यो फिल्मले जस्तो सुकै कठोर हृदय भएको मानिसलाई पनि रुवाउँछ । जब वीरले २२ वर्षपछि जारालाई भेट्छ, त्यो दृश्यले जोकोहीको मुटु हल्लाइदिन्छ । उनीहरुको यो पुनर्मिलन बलिउडको इतिहासमा सबैभन्दा आइकनिक दृश्य मानिन्छ ।
‘वीर जारा’ का पुनर्मिलन दृश्यले उत्तिकै भावुक बनाउछ
फिल्म ‘रंग दे बसंती’ को अन्तिम दृश्य उत्तिकै कारुणिक छ । यो फिल्मको कथाले शुरुदेखि नै तपाईंमाथि गहिरो प्रभाव छोड्दछ । फिल्मका अन्तिम अन्तिम दृश्यले जोकोहीलाई पनि सोच्न बाध्य बनाउछ । त्यो सोचिरहँदा धेरैका आँखाबाट आँशु झरेको पत्तै पाउदैनन् ।
फिल्म ‘कल हो ना हो’ मा मृत्युशैयामा अमनको दृश्यको कुरै नगरौं । कोही पनि यो दृश्यलाई छुटाउन चाहँदैनन् । अमन मृत्युशैयामा नैनासँग कुरा गरिरहेको दृश्यले जोकोहीलाई रुवाउँछ । यस्तो भावुक दृश्य जुनसुकै बलिउड फिल्ममा कमैमात्र देख्न पाइन्छ । यदी तपाईं रुन वा दुःखी हुने मुडमा हुनुहुन्नँ भने पनि यसको अन्तिम दृश्यले तपाईंलाई केही तनाव अवश्य नै दिन्छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, मङ्सिर ८ २०७७ १७:०६:१०